I-China Ukubonelela ngesixhobo sokusika se-30Khz se-Ultrasound seRobot's Hand Cutting Usebenzisa ukwenziwa kunye nefektri Qianrong
Ukubonelela nge-30Khz ye-Ultrasound Cutting Device yeRobot's Hand Cutting Usebenzisa
Into No QR-C30Y
Ubunzima beBlade 1.25kgs
Ubunzima bokuqala 11.5Kg
Ukusetyenziswa Umsiki welaphu
Umgaqo wokusika kwe-ultrasonic imela kukuguqula i-50 / 60Hz yangoku ibe ngama-20, 30 okanye 40kHz amandla ombane ngokusebenzisa i-ultrasonic generator. Amandla aguquliweyo ojikeleze amandla ombane abuye aguqulwe abe kukungcangcazela koomatshini bexesha elifanayo kwi-transducer, emva koko ukungcangcazela koomatshini kudluliselwe kwimela yokusika ngeseti yesixhobo semodyuli ye-amplitude enokutshintsha ubungakanani. Isisiki seerabha ye-ultrasonic siyangcangcazela kunye nobude bayo nge-amplitude ye-10-70μm, iphinda-phinda ama-30,000 amaxesha (30 kHz) ngomzuzwana (intshukumo yentsimbi iyimicroscopic, ekunzima ukuyibona ngeliso lenyama). Imela yokusika emva koko igqithisela amandla ombane afunyenwe kwindawo yokusika yomsebenzi oza kunqunyulwa. Kule ndawo, amandla ombane asetyenziselwa ukusika irabha ngokwenza amandla emolekyuli erabha kunye nokuvula ikhonkco leemolekyuli.
Iimpawu zokusika i-ultrasonic zokusika umatshini
1. Kulula ukufaka isicelo kwimveliso ezenzekelayo.
2. 1mm blade ilahleko encinane izinto.
3. Isantya esikhawulezayo, ukusebenza ngempumelelo okukhulu kwaye akukho kungcoliseka.
4.Ukusika ngokuchanekileyo kuphezulu, kwaye izinto zerabha azikhubazekanga.
5. Umphezulu wokusika unokuguda kakuhle kunye nokusebenza kakuhle kokubopha.
6. Izixhobo zincinci ngobukhulu kwaye zinokusetyenziselwa ukusika ngesandla.
1.Ukuzinza okuphezulu: Umvelisi we-ultrasonic uvelisa ukungcangcazela kwe-electromagnetic xa isebenza, kwaye uyiguqulele kwi-oscillation yoomatshini kwaye uyihambise kwiimela zokusika kunye nezinto zokusika. Ukusikwa koomatshini kuyenziwa, ke akukho mfuneko yokusika okubukhali efunekayo, kwaye ukunxiba kwencakuba kuncinci, kwaye kwangaxeshanye intloko yokusika inokutshintsha endaweni yayo.
2. Ukhuseleko kunye nokhuselo lokusingqongileyo: Xa isitshetshe se-ultrasonic sinqunyiwe, iqondo lobushushu lentloko yokusika lingaphantsi kune-50 degrees Celsius, kwaye akukho msi kunye nevumba eliza kwenziwa, eliphelisa ingozi yokwenzakala kunye nomlilo ngexesha lokusika.
3.Ukusika ngokucocekileyo: Ukusukela ukuba i-wave ye-ultrasonic inqunyulwe yinyikima yokuhamba ngesantya esiphezulu, loo nto ayizukuhambelana nomphezulu wentsimbi, kufuneka kuphela uxinzelelo oluncinci ukusika, kwaye izinto ezibuthathaka kunye nezithambileyo azikhubekanga kwaye azinxitywanga, kwaye ilaphu lisikiwe kwaye ngokuzenzekelayo litywinwe. Ayizukubangela ukophuka.
Umsebenzi olula: imela yokusika idityaniswe nomvelisi we-ultrasonic, i-generator idityaniswe kwii-220V main, kwaye iswitshi sinokunqunyulwa ukuxhasa ukusika okuphethwe ngesandla kunye nomatshini.
Egqithileyo Isandla esine-40khz ye-Ultrasonic yokuTya ukutya kunye noMvelisi weDijithali Akukho Knife yokuNcamathela
Okulandelayo: Umsiki we-Ultrasonic ohamba rhoqo no-35Khz wokuSika iiMathiriyeli eziNinzi ezigqagqeneyo